Fawsiya Yusuf: "Wax badan ayaan ka dhex qaban karaa Somaliya iyo Somaliland" - Horseed Media
Fawsiya Yusuf: “Wax badan ayaan ka dhex qaban karaa Somaliya iyo Somaliland” November 5, 2012 Share this:FacebookTwitterGoogleWasiirka arrim,aha dibadda ahna Raysalwasaare kuxigeen fawsiya Yusuf Xaaji AdamMarwo Fawsiya Yusuf Xaaji Adam ayaa noqotey gabadhii u horeysey ee Soomaaliyeed ee noqota wasiirka aarimaha dibadda iyo weliba raysalwasaare ku xigeen kadib markii xilkaas ay u garteen Madaxweynaha Soomaaliya iyo Raysalwasaarihiisa Cabdi Faarax Shirdoon. Marwo fawsiyo ayaa ka soo jeeda gobolada Waqooyi ee Soomaaliya oo hadda ay ka jirto dawlad aan caalamku ictriaafsaneyn laakiin ku dghawaqdey in ay ka go’een Soomaaliya.
Wasiirka cusub ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya loo magacaabey ayaa horey uga muuqan jirey siyaasada Somaliland iyo gooni u istaagooda, waraysigii u horeeyey ee ay bixiso ayey ka wareegtey in ay si qumaati ah uga jawaabto in ay meel iska dhigtey hamigeedi ahaa kala go’a Soomaaliya, maadaama dastuurka la doonaayo in ay ku shaqeyso una dhaarato uu dhigayo midnimada Soomaaliya muqaddas tahay gorgortana aan la gelin karin.
Laanta afsoomaaliga ee BBC aya waraysigii labaad ee ay bixixiso Marwo Fawsiyo la yeeshey, inkasta oo aan si toos ah loo weydiin qaddiyadeedi hore ayaa haddana ay sheegtey in ay wax badan ka qaban karto isu soo dhaweynta Somaliland iyo Somaliya. Wasiirka cusub ayaa sheegtay in wasaaradda arrimaha dibadda ay u leedahay khibrad dheer isla markaana ay ka soo shaqeysey muddo 12 sano iyada oo diblomaasiyad ka ahayd dalalka jarmalka iyo Ruushka. Hoos ka dhegayso waraysiga oo dhamaystiran.